Okungakuxoshisa emsebenzini okufanele ukushiye ku-2019 – Daily Worthing
Njengoba imisebenzi iyimvela kancane, izinkampani zidiliza mihla namalanga. Kubalulekile ukuthi uma unomsebenzi uwuphathise okwezikhali zamantungwa ngoba baningi abathandazela lelo thuba. Uma ususebenze endaweni eyodwa isikhathi eside, ugcina uzizwa usekhaya okungesiyo into embi ngoba emsebenzini yilapho esichitha khona isikhathi esiningi.
Ngaphambi kokuthi singene ku-2020, ake uzihlole ukuthi awukajwayeli kwaze kweqa emsebenzini. Okungakubeka egcupheni yokuthi ugcine ukhonjwe indlela. Sikuphathele imikhutshana embalwa okufanele ukushiye ku-2019 ngoba ingagcina ikuxoshisile emsebenzini.
Ukufika emsebenzini unebhabhalazi
Ayikho into ecasula njengokusebenza nomuntu ophefumula iphunga lotshwala bayizolo. Lona umkhuba ongacasuli abaphathi nje kuphela kodwa uyisinengiso ngisho kozakwenu imbala. Lokhu kungenza ukuthi bakhalaze ngawe uze ugcine usuxoshiwe emsebenzini.
Wake wasebenza nomuntu ohlala ensinsitheka ocingweni ngesikhathi somsebenzi? Lo mkhuba uyisidina ngoba uphazamisa ukusebenza kozakwenu. Gwema ukuba socingweni isikhathi eside ngesikhathi somsebenzi. Kungaba u-WhatsApp, ucingo lomsebenzi noma iselula yakho, phuma uyokhulumela ngasese uma kukhona okuphuthumayo.
Okwenzeka emgwaqeni ngeke sakulawula kodwa makungabi umkhuba wakho ukufika emsebenzini sekwedlule isikhathi. Khumbula ukuthi awuzisebenzi, ngakho ke ngeke ufike ngesikhathi esethandwa nguwe. Hlonipha isikhathi esibekiwe, ubike uma uzofika sekwedlule isikhathi kodwa makungabi yinto yansuku zonke.
Ukubuka ama-movie emsebenzini
Lesi ke isihlava esesingenisile, ufice umuntu engenawo ngisho amahloni ezibukela imidlalo eyahlukene ngesikhathi somsebenzi. Ngale kokuchitha isikhathi somsebenzi, udla imali eningi ye-data uma ubuka nge-internet yomsebenzi futhi usebenzisa i-computer yomsebenzi.
Izaba zokungayi emsebenzini
Sonke siyehlelwa yizimo eziphuthumayo, ingakho nezinkampani zinamalivu aqondene nalesi simo. Kodwa lokho akusho ukuthi wena kungapheli iviki ungaqhamukanga nezaba. Njalo wena ubika ukuthi ugulelwa umntwana noma usushonelwe. Gwema zonke lezo zinto ngoba zizokudalela amazinyo abushelelezi.
Tags: Okungakuxoshisa Emsebenzini
Ex-City defender reveals 2nd reason Benni was sacked
6 times Minnie Dlamini has had her foot on our necks this year!